Ho tontosaina anio etsy amin’ny biraon’ny CENI etsy Nanisana ny fampiofanana ireo kandida ho depiote mikasika ny fiatrehana izay tontolom-pifidianana ho avy izay. Hatramin’izao moa dia mbola hita ho marisarisa ireo olom-pirenena, eny, fa nahatramin’ireo andrasana ho kandida aza. Sakana rahateo koa ilay onitra 5 tapitrisa takiana.
Ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina ihany izany no hany mba tsy ahiana ho tafiditra ao anatin’ny lisitry ny hazalambon’ny fitondrana Andry Rajoelina rah any fandinihana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Saika taraiky araka ny fitenin’ny tanora azy avokoa ireo olon’ity filoham-pirenena teo aloha ity.